प्रदर्शनमा किन हच्किए नेपाली सिनेकर्मी ?- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
प्रदर्शनमा किन हच्किए नेपाली सिनेकर्मी ?
अहिले रेस्टुराँ, क्लबदेखि सार्वजनिक यातायातमा खुट्टा टेक्न नसक्ने भीड बढेको छ तर सिनेकर्मी भने बन्द कोठाभित्रको हलमा दर्शक आउन डराउने बहाना बोकेर उभिएका छन्
कार्तिक १५, २०७८ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — फूलपातीको दिनदेखि सोभित बस्नेत निर्देशित सिनेमा ‘डाँडाको वरपीपल’ प्रदर्शनमा आयो । अंग्रेजी सिनेमा ‘फास्ट एन्ड फ्युरियस–९’ लगाउँदै घटस्थापनादेखि हल खुलेसँगै प्रदर्शनको आँट गर्ने यो पहिलो नेपाली सिनेमा थियो । तर, सलोन बस्नेत अभिनीत फिल्मले हलसम्म दर्शक तान्न सकेन । हलमा लागेको तेस्रो दिनमै क्यूएफएक्सले फिल्म हटायो ।
बानेश्वरको वान सिनेमाजमा भने प्रदर्शनको दोस्रो साता पुगे पनि दर्शकको उपस्थिति शून्यप्रायः थियो । तीन शो त रद्द नै भए । फिल्मको बक्स अफिस रिपोर्ट पनि खासै उत्साहजनक छैन । ‘उत्साहजनक छैन बक्स अफिस रिपोर्ट । निकै न्यून छ आम्दानी,’ चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले कान्तिपुरलाई ‘डाँडाको वरपीपल’ बक्स अफिस रिपोर्ट दिन चाहेनन् ।
नेपाली सिने क्षेत्रमा सुदर्शन थापाको परिचय चल्तीको निर्देशककै छ । तर, तिनले पनि झन्डै दुई वर्षदेखि फिल्मको प्रदर्शनको आँट गर्न सकेका छैनन् । महामारीका कारण रिलिजको तीन दिनअगाडि हल बन्द भएपछि थापाको फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु–२’ को प्रदर्शन स्थगन भयो । प्रचारप्रसारमा लाखौं खर्च भइसकेको थियो । ‘म यस्तो गीत गाउँछु–२’ मा बजारमा चलेका कलाकार पूजा शर्मा र पल शाह पनि छन् । हलसम्म दर्शक फर्काउन सक्ने सम्भावना बोकेको कलाकार सिनेमामा हुँदासमेत निर्देशक थापा फिल्म प्रदर्शनका लागि ढुक्क छैनन् । उनलाई लाग्छ, ‘सामान्य अवस्थामा झैं दर्शक हलसम्म आइदिएनन् भने ?’
थापालाई मात्रै होइन प्रायः सबैजसो निर्माता/निर्देशकलाई यही डरले लखेटिरहेको छ । महामारी केही मत्थर भएपछि सरकारले भदौ १८ मा सिनेमाहल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । हल खुलेसँगै प्रदर्शनमा आएको ‘फास्ट एन्ड फ्युरियस–९’ र ‘नो टाइम टु डाई’ ले ६० प्रतिशत दर्शक प्राप्त गरेको हलवालाको दाबी छ । यही शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको अंग्रेजी फिल्म ‘भेनम’ ले पनि दर्शकको राम्रै साथ पाइरहेको छ । तर नेपाली निर्माताले भने सिनेमा प्रदर्शनको जोखिम मोल्न सकिरहेका छैनन् । अक्सर दसैं–तिहारको बिदामा सिनेमा चलाउन तँछाडमछाड गर्ने फिल्मकर्मी यसपालि मौन छन् । ‘डाँडाको वरपीपल’ को हविगतले पनि उनीहरूको सातो उडाएको छ । महामारीअघि बनेका र महामारीबीच तयार भएर प्रदर्शनका लागि ठिक्क भएका चार दर्जनभन्दा बढी फिल्म छन् । तर, कुनैले पनि प्रदर्शनको हिम्मत जुटाउन सकेनन् ।
प्रदर्शनमा आउने सिनेमालाई सहयोग गर्ने चलचित्र विकास बोर्डले प्रतिबद्धता जनाउँदासमेत निर्माताहरूले हलमा लगाउन सकेनन् । बोर्डले पुस मसान्तसम्म प्रदर्शनमा आउने सिनेमाको ‘इन्कोडिङ’, ‘भर्चुअल प्रिन्ट कस्ट’ (भीपीसी), ‘प्रसारप्रसार तथा छपाइ’ का लागि हुने खर्च अनुदानमा दिने घोषणा गरिसकेको छ । नेपाली सिनेमा रिलिज गर्न डराइरहेका अधिकांश सिनेकर्मीको आँखा अक्षय कुमारको ‘सूर्यवंशी’ मा छ । उनीहरू अक्षयको सिनेमालाई हेरेर आफ्नो फिल्मको प्रदर्शन मिति तोक्ने तयारीमा छन् । वितरक मनोज राठीले महँगो रकममा उक्त सिनेमा प्रदर्शनका लागि नेपाल ल्याएका हुन् । सिने क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आफूले यो जोखिम उठाएको उनको तर्क छ । ‘हलमा दर्शक छैनन् । सिनेमा महँगैमा किनेको छु । अब आशा छ दर्शक सिनेमा हेर्न हलसम्म आइदिनुहुन्छ,’ उनले भने ।
वितरकले जोखिम उठाइरहँदा सिनेकर्मीले किन प्रदर्शनको आँट गर्न सकिरहेका छैनन् त ? ‘बल्ल हल खुल्यो । हल खुल्नेबित्तिकै सिनेमा प्रदर्शन गर्न सकिँदैन नि त । दर्शक नआउला भन्ने चिन्ता त भइहाल्छ । बल्ल त मानिस महामारीको डरबाट बाहिर निस्किएका छन् । अहिले पहिलाकै अनुपातमा फिल्म चल्छ/चल्दैन भन्ने डर छ निर्मातामा । भारतमै अक्षय कुमारको सिनेमा चलेन । अर्को कुरा त नेपालमा फिल्म प्रदर्शन गर्न निर्माताले मात्रै जोखिम उठाउनुपर्छ । सबैले होस्टेमा हैसे गरे आँट गर्न सकिन्थ्यो । निर्मातालाई त डर हुन्छ नै,’ निर्मातासमेत रहेका थापाले भने, ‘एउटा फिल्मले खाल्डोमा पार्‍यो भने बाहिर निस्कन गाह्रो छ यहाँ । ऋण लिएर फिल्म बनायौं, अहिले ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ । सिनेमाको सय प्रतिशत जोखिम आफैंले मोल्नुपरेपछि प्रदर्शन गर्न निर्माता डराएका हुन् ।’
त्यस्तै निर्देशक दीपेन्द्र लामा पनि थापाले जस्तै लगानी उठ्ने अनिश्चितताले हलमा नेपाली सिनेमा प्रदर्शन गर्न निर्माताहरू डराइरहेको बताउँछन् । ‘अंग्रेजी सिनेमामा भयंकर दर्शक आइसकेका छैनन् । सायद त्यही देखेर पनि कतिले फिल्म प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाली फिल्मको स्तर पहिलादेखि नै कमजोर हो । ९० फिल्म प्रदर्शन हुँदा मुस्किलले १० वटा सिनेमाले लगानी उठाउँथ्यो,’ उनले भने । विदेशी डायस्पोरामा पनि सिनेमाको आम्दानी शून्य छ । नेपालीहरूलाई हलबाट उठ्ने पैसामा भर छ । ‘यस्तो बेलामा दर्शक क्षमता पनि ५० प्रतिशत मात्रै छ । पूरा टिकटमा दर्शकलाई सिनेमा देखाउन नपाएनन् । त्यसमाथि अझै दर्शकमा डरको मनोविज्ञान छ,’ उनले भने, ‘अब सिनेमा प्रदर्शन गरेको एक हप्तामै जिल्ला प्रशासनले हल बन्द गर्ने निर्देशन नदेला भन्न सकिँदैन । त्यही अनिश्चितताले पनि सिनेमा प्रदर्शन गर्न नसकिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’
हुन त अहिले रेस्टुराँ, क्लबदेखि सार्वजनिक यातायातमा खुट्टा टेक्न नसक्ने भीड बढेको छ । तर सिनेकर्मी भने बन्द कोठाभित्रको हलमा दर्शक आउन डराउने बहाना बोकेर उभिएका छन् । निर्देशक मनोज पण्डित निराशातर्फ गइरहेको सिनेमाको ग्राफले निर्मातालाई फिल्म प्रदर्शनको हौसला नमिलेको धारणा राख्छन् ।
‘अहिले हल खुले पनि सिनेमा प्रदर्शन गर्न नसक्नुका पछाडि आफ्नो कन्टेन्टमाथि विश्वास नहुनु नै प्रमुख कारण भने होइन । सिनेमा क्षेत्र धेरै समिश्रणले बनेको छ । पछिल्लो समय नेपाली सिनेमा निरासामा ओरालो लागिरहेका थियो । धेरै फिल्म त घाटाको व्यापारतर्फ अगाडि बढेको छ नि त । अब निराशाको यो माहोलमा उत्साहको बाटो नभेटुन्जेल सिनेमा प्रदर्शन गर्न गाह्रैपर्छ,’ उनले भने, ‘सिनेमा प्रदर्शन त सामूहिक मनोविज्ञान हो । सिनेमा बनाउने व्यक्तिले त तत्कालीन समयमा अन्य फिल्मकर्मीले कस्तो कथ्य सिर्जना गरिरहेको छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन्छ । कोरोना कालमा सिनेमाहलमा आउन दर्शक उत्साहित छैनन् भन्ने कथ्यलाई हामीले चिर्न सकेका छैनौं ।’
अहिले नेपाली सिनेमा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुगेको पण्डितको भनाइ छ । ‘पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नु गलत होइन । हो नेपाली सिनेमाको गुणस्तर बढ्न सकेको छैन । नेपाली सिनेमामा केही निश्चित शैलीका सिनेमाबाहेक अन्यमा दर्शक आइदिँदैनन् भन्ने कथ्यको विकास हुँदा त्यसमाथि पुनर्व्याख्या गर्न सकेनौं ।’
सिनेमा क्षेत्र अहिले मौन भएर बसेको उनको तर्क छ । ‘यसरी गरौं भन्ने सामूहिक रूपमा कुनै कोसिस नै भएको छैन । हाम्रो सिने क्षेत्र सामूहिकतामा अगाडि बढ्न सकेनन् । संकटको बेलामा त डराइहाल्छन् नि,’ उनले भने, ‘हाम्रो कन्टेन्ट अधकल्चो छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । यदि आफ्ना लागि बनाएको सिनेमा छ भने उसले अझैं कुर्न सक्छ । तर बजारका लागि बनाइएको सिनेमाले त बजारको विचारधाराअनुसार अगाडि बढ्छ । हामी यी दुवै मार्गमा छैनौं । अलमलिरहेका अवस्थामा छौं । सिनेकर्मी भन्नेबित्तिकै आँट गर्न सकिहाल्छन् भन्ने छैन ।’
प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ ०९:२०
संगठन सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुन छाडेर कहिले गठबन्धन त कहिले पार्टी एकताबारे अभिव्यक्ति
कार्तिक १५, २०७८ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक महिनाअघि करिब ३१ लाख पार्टी सदस्य बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याए । त्यहीअनुसार वडा कमिटीसम्म माओवादीले परिपत्र गर्‍यो । तर यति बेला योजनाअनुरूप संगठन सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा दाहाल कहिले गठबन्धन त कहिले पार्टी एकताका पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
संघमा माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टीको हैसियतमा छ । नेकपा एकतापूर्वको अवस्था पुगेपछि कतिपय नेता–कार्यकर्ताले एमाले रोजेपछि माओवादीसामु आगामी निर्वाचनमा बलियो उपस्थिति देखाउने चुनौती छ । यसका लागि पार्टीलाई मजबुत बनाएर चुनावमा उतार्नेभन्दा पनि सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्म कायमै गर्ने र पार्टी एकता गर्ने विकल्प दाहालले देखेका छन् ।
शनिबार सर्लाही पुगेर उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग एकताको प्रस्ताव गरे । ‘मलाई उपेन्द्र (यादव) जी र महिन्द्र (राय यादव) जीले कस्तो मान्छे हो, हाम्रो पार्टी कस्तो हो भनेर राम्रो चिन्नुहुन्छ । नडराइकन पार्टी एउटै बनाऔं । सिद्धियो,’ उनले भनेका थिए, ‘म जनकपुर आउँछु । जनकपुरमा घोषणा गरौं । एउटा राम्रो सन्देश जान्छ । अर्को चुनावमा मधेसमा लहर आउँछ । हामी सरकार बनाउँछौं । तनाव किन लिनुपर्‍यो ?’
दाहालले साउन ३० को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आगामी निर्वाचनमा माओवादी प्रमुख शक्ति बन्ने आधार बन्दै गएको तर्क गरेका थिए । ‘आगामी निर्वाचनसम्म माओवादी देशको प्रमुख शक्ति बन्ने सम्भावना छ । त्यहीअनुसार हामीले संगठन निर्माणमा सक्रियता देखाउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, गठबन्धनको सरकारलगायत पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिएको हुनाले आगामी निर्वाचनमा प्रमुख शक्ति बन्ने दाहालको दाबी थियो । सोहीअनुसार असोज पहिलो साता बसेको स्थायी कमिटी बैठकले संगठन सुदृढीकरणको अभियान सञ्चालन गरेर पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनअघि ३० लाख ९४ हजार १ सय ६८ सदस्य र समर्थकलाई संगठित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्लाहीबाट जसपासँग पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका दाहालले त्यसअघि अर्थात् बिहीबार गृहजिल्ला चितवनमा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमार्फत जाने बताएका थिए । ‘जहाँ निरंकुश र प्रतिगामी प्रवृत्ति हावी हुन्छन्, जहाँ तिनीहरू (एमाले) अलि बलिया छन्, त्यस ठाउँमा हामीले कांग्रेससँग सिट एडजस्टमेन्ट गर्ने । बाँकी ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र वाम गठबन्धनलाई कायम राख्ने भन्ने केन्द्रीयस्तरमा समझदारी छ,’ दाहालले भने थिए ।
एमालेसँगको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले तुहाइदिएपछि विघटन भइसकेको माओवादी ब्युँताउने चुनौती दाहालसामु छ । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि मतदातालाई आकर्षित गर्ने मुद्दा माओवादीसँग छैनन् । नेता तथा कार्यकर्ताको कार्यशैली भड्किलो बन्दै गएको छ । जसका कारण कार्यकर्ता विकर्षित हुँदै गएको दाहालको बुझाइ छ । त्यसैले उनले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन र विचार मिल्नेसँग पार्टी एकता चाहेका छन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेसँग मोर्चा बनाएको माओवादीले स्थानीय निर्वाचनमा केही ठाउँमा कांग्रेससित सहकार्य गरेको थियो ।
निकट एक नेताका अनुसार दाहालका एकपछि अर्को अस्थिर अभिव्यक्तिले कार्यकर्तामा उत्साह थपेका छैन । ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकलगत्तै नेताहरूमा एक खालको ऊर्जा देखिन थालेको थियो । सबै आ–आफ्नो क्षेत्रमा संगठन निर्माणका काममा जुटेका थिए । तर, अध्यक्षले कहिले पार्टी विघटन त कहिले नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने, कहिले गठबन्धनमार्फत आगामी निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘पहिला आफ्नो पार्टी बलियो बनाउनतिर पो लाग्ने हो त । उहाँको त्यता ध्यान कम देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै आलोचना हुन थालेको छ । त्यसले त कार्यकर्तालाई निराश बनाउन थालेको छ ।’ दाहालले केन्द्रीय कमिटीमा पेस गरेको र बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनामा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी गराउने र संघीय एवं प्रादेशिक निर्वाचनमार्फत देशको नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने गरी संगठनात्मक कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह भने दाहाल दुविधामा नरहेको र पार्टीको रणनीतिअर्न्तगत नै बोलेको दाबी गर्छन् । ‘राजनीतिक प्रतिवेदन वा बैठकका छलफलमा पार्टीले आफ्नो संगठन पनि सुदृढ गर्नुपर्ने र चुनावमा खासगरी एमाले बलियो भएको ठाउँमा गठबन्धन गरेर परास्त गर्ने हाम्रो पार्टीको घोषित नीति नै छ । त्यसअनुसार नै अध्यक्ष बोल्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘जहाँ केपी ओली लड्छन्, प्रचण्ड, माधव नेपाल लड्छन्, यसपालि त कुरुक्षेत्र नै हुन्छ । सबैले एकअर्कालाई हराउनका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्छन् । त्यसकारण पार्टीको संगठन बलियो बनाउने काम पनि सँगसँगै अगाडि बढेको छ ।’
प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ ०८:२७